Sida looga nadiifiyo mobiladaada gacanta ee loo yaqaan 'Android mobile' si ka dhan ah coronavirus | Androidsis
Sida loo nadiifiyo moobilkaaga si looga saaro dhammaan raadadka coronavirus oo looga tago si aan hagaagsaneyn
Manuel Ramirez | | Noticias, Khiyaamada Android, Tababarada
Ma garanayno, laakiin maalintii oo dhan waxaan ku qaadanaa taabashada moobilkeena, markaa waan ku tusi doonnaa sida saxda ah loogu nadiifiyo mobilada oo sidaasna looga takhaluso dhammaan raadadka fayras kasta sida coronavirus.
Hadday tahay la xiriirida taleefanka gacanta waa mid aad u kacsanSidoo kale ma ogaanayno in mid ka mid ah ficil celintayada falcelinta ahi ay tahay taabashada wejiyadayada ku dhowaad annaga oo aan ka warqabin. Marka isku dayga inaad nadiifiso moobilkaaga maalmahan muhiim ayey u tahay xakamaynta faafitaanka fayraska 'coronavirus' iyo in aan is qaadsiin karno nafteena sidoo kale aan u qaadsiino kuwa kale. Waxaan ku sameyn doonnaa tallaabooyin taxane ah.
1 Talooyinka koowaad
2 Sida ugu wanaagsan ee mobiilkaaga looga nadiifiyo coronavirus: Samsung
3 Sida loo nadiifiyo moobilkaaga adigoon dan ka laheyn lakabka ilaalinta oleophobic: mobiil kasta
Tilmaamahan waxaa sidoo kale loo isticmaali karaa qalab kale oo taxane ah sida teebabka, kumbuyuutarrada gacanta ama jiirka. The fikraddu waa in jeermiska lagu nadiifiyo oo la nadiifiyo qalabkeena maalin kasta markasta oo aan ka tagno aaga aan ka talino ama amniga. Tusaale ahaan, haddii aad bixi doontid, markaad soo noqotid waa lagama maarmaan inaad nadiifiso moobilkaaga. Iyagu waa tallaabooyin muhiim u ah badbaadada iyo nadaafadda haddii aan rabno inaan wada joojino faafitaanka COVID-19.
Maskaxda ku hay taas ma isticmaali karno wax soo saar in aan fahamsanahay in ay disho fayrasyada. Tusaalaha tani waa biliij ama xitaa aalkolo aad ka iibsan karto farmasiyada. La mid ah 96 darajo.
Waxaan u leenahay maxaa yeelay waa aad u fudud in la waxyeeleeyo moobilkeena haddii alaabada saxda ah aan la dooran iyo tilaabooyin taxane ah oo sax ah ayaa la raacaa. Waxaan mar labaad ku celcelinaynaa inay tahay inaan si joogto ah u nadiifino aaladda aan leenahay si aannaan nafteenna ugu qaadsiin oo aan dadka kale u qaadsiin.
Ha quusin moobilkaaga alaab kasta.
Ha u isticmaalin biliij, nadiifiyeyaasha dhalada, iyo hawo cadaadis leh.
Hubi tilmaamaha ay ku siisay soo-saaraha nadiifinta mobilkaaga.
Xaaladda haysashada mobilka leh iska caabbinta biyaha, xitaa haddii aad ku dhex marto tuubada, tani macnaheedu maaha inaad baabi'ineyso raadadka coronavirus.
Iska ilaali inaad qoyaan ka hesho meelaha ay furan tahay
Sida ugu wanaagsan ee mobiilkaaga looga nadiifiyo coronavirus: Samsung
Sidii aan soo sheegnay, waa inaan dib u eegno talaabooyinka ay soo saaruhu lafteeda ku sifeynayaan nadiifinta mobilada si aan loogu isticmaalin badeecad aan ku habboonayn. Samsung waxay daabacday talooyin taxane ah si aad u nadiifiso taleefannadaaga:
Marka hore waanu daminnaa.
Samsung ayaa caddeysay arrintaas waxaan isticmaali karnaa xalka ku saleysan aalkolada, laakiin had iyo jeer adigoon toos u isticmaalin dareeraha mobilka.
Waxaan ku qooynaa mashiinka microfiber aalkolo yar oo isopropyl ah waxaanan si fiican uga gudubnaa moobaylka. Masaxa waa inuu ahaadaa mid qoyan, oo aan waligiis qoyan.
Waxaan dul marineynaa dhammaan nooks iyo crannies.
Tilmaamaha kale ee Samsung:
Hubi ilaalinta IP-ga ee mobilada, maxaa yeelay tani waxay muujineysaa iska caabbinta biyaha iyo dareerayaasha. Caqli ahaan S20 ama Note10 + ayaa iska caabiya in ka badan dareeraha gaari kara qaar ka mid ah isku xirnaantooda.
Samsung wadamada qaar waxay bixisaa adeeg nadiifin UV ah taasina waxay noo saamaxaysaa inaan ka gudubno aalkolada iyo waxyaabaha laga helo. Waxaa loo yaqaan Samsung Sanitizing waxaana ku haysan doonnaa halkan Spain sida waddamada kale.
Sida loo nadiifiyo moobilkaaga adigoon dan ka laheyn lakabka ilaalinta oleophobic: mobiil kasta
Ku nadiifi mobilka khamriga isopropyl waxay ka dhigan tahay inaan baabi'inayno lakabka olephobic-ka ah shaashadaha iyo taas oo ka hortageysa moobiilkeenna inuu soo muuqdo iyadoo farahayagu ay wax walba ku wasakhoobayaan. Aan aragno, halkan waxa muhiimka ah waa nadaafadda, sidaa darteed waxaan u sameyn doonnaa sidan:
Waxaan isticmaali doonaa khamriga Isopropyl 70% (Apple waxay u muujineysaa sidan oo kale iPhone-keeda) iyo inta kale ee mobilada ah waa mid ku habboon.
Waxaan u isticmaali karnaa faashad, mid ka mid ah maradaas microfiber-ka ama masax masax aalkolo in aan marwalba u adeegsan doonno ujeeddooyinkan.
Waxaan sidoo kale awoodnaa adoo isticmaalaya saabuun laftiisa ama xalka aalkolada, laakiin marwalba iska ilaali, iyadoo kuxiran ilaalinta biyaha mobilkaaga, inay taabato godadka laga galo taleefankaaga casriga ah.
Y ha ilaawin inaad nadiifiso daboolka sidoo kale, mar haddii wax kasta oo la yidhi waxtar yeelan doonin haddii aynaan si sax ah u nadiifin. Waxaan isticmaali karnaa saabuun iyo biyo kadibna waxaan u ogolaan karnaa kiiska kaligiis in yar oo qalalan kahor intaanan markale ugu isticmaalin moobilkeena.
A taxane ah tilmaamaha lagu nadiifiyo mobilka sidaa darteed iska ilaali inaad yeelato raad raaca fayraska loo yaqaan 'coronavirus' iyo in maalmahan guriga la joogo ay tahay in si dhab ah loo qaato iyadoo loo eegayo nadaafadda iyo nadaafadda; ha moogaan kuwan ciyaaraha khadka tooska ah ee ciyaartoyga badan si aad ugu raaxeysato qoyska iyo asxaabta.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Noticias » Sida loo nadiifiyo moobilkaaga si looga saaro dhammaan raadadka coronavirus oo looga tago si aan hagaagsaneyn
Telefoonada casriga ah ee ugu wanaagsan ee la bixiyo Maalinta Aabbaha
Castlevania: Symphony of the Night, ciyaarta udhaxeysa ciyaaraha asal ahaan ka yimid ereyga Metroidvania